Qalabka Guriga Soo-saareyaasha & Alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda Qalabka Guryaha
Waa aag ballaaran oo ay ku xannibto kaneecada duufaanka duufaanka wata ee nuuga kaneecada. Waxyeello uma geysaneyso jirka aadanaha inta la dilayo kaneecada. Nadiifinta anion Waxaa awood u leh micro USB oo dib loo buuxin karo waana wax aad ugu habboon banaanka.
Dhar gacmeed gacmeed ku haysta huuriye la qaadan karo uumi 1000W si toos ah & uumid qumman, 45s kuleylka degdega ah, otomaatiga-banaanka ah, Taangiga biyaha ee awooda leh ee 90ml, guriga iyo safarka.
Uumeeye dharka yar yar oo la qaadan karo oo leh saxan dhoobada, jirka maaddada PC-ga heer sare ah. 2kiiba 1 qalalan & qoyan bir laba dhinac ah. Riix badhanka riix-riix si loogu sahlanaado isticmaalaha. 110ml taangi biyo oo awood badan leh, ayaa lagu dhajin karaa 8-10 daqiiqo.
Nadiifiyeha Xiinka Xiinka oo leh naqshad muuqaal gaar ah, taabasho siman sida maqaarka ilmaha.
Hal badhan oo hawlgal fudud ah, shan daqiiqo otomaatig ah demin. 12V danab hooseeya oo cufan-caddeyn ah & darajo IP54 oo biyuhu xireen, badbaadin iyo adkeysi leh.Shariidad sare oo buuq hooseysa, heerka buuq kayar 60dB. Cabbir yar oo la qaadi karo, oo ku habboon in la qaado, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa sanduuqa Jawharadda. Codso muraayadaha, dahabka, saacadda, mandiillada, ilkaha, iyo wixii kale.
Mileteriga dabaqa oo aan xad-dhaafka ahayn iyo faakiyuum-nadiifiyaha ayaa ah hal-abuure nadiifiyayaal astaamo isku dhafan oo ay ka mid yihiin: Maydhid qoyan iyo faakiyuum qashin isku mar ah; Is-nadiifin iyo xukun ku saleysan isku dhafan; Biyo nadiif ah iyo haanta biyaha wasakhda ah ayaa lakala saaray; Awood wax soo nuugid iyo dhaqid qoyan oo isku dhafan; Cordless loogu talagalay baakad batari oo furi kara; 17-30 daqiiqo oo socod ah qaababka Standard / Max; Shaashadda LED-ka ayaa u muuqata xaaladda shaqada; Nalalka UVC ee ku dhexjira bakteeriyada iyo dilka caarada; Codka xusuusinta oo shaqeynaya, iyo madadaalo badan in la ogaado.